नायिका स्वस्तिमा खड्का पनि यसरी खु*ल्न लागिन बि*किनी अवतारमा ….
नायिका स्वस्तिमा खड्का पछिल्लो समय बि*किनी अ*वतारमा खुल्दै जान थालेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले बि*किनी अ*वतारका तस्वीरहरु शेयर गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । केही समयअघिसम्म पनि उनलाई सामान्य नायिकाका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । न त उनले अभिनय गरेका चलचित्रका कारण नै उनको चर्चा हुन्थ्यो ।
चलचित्र ‘बु*लबुल’ मा अभिनय गरेपछि भने स्वस्तिमाको अभिनयको ता*रिफ हुन थाल्यो । यो फिल्ममा पनि स्वस्तिमा एक सामान्य र सोझी युवतीको भूमिका निभाएकी थिइन् । पछिल्लो समय भने उनले सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो बि*किनी अ*वतारलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्न थालेकी छिन् ।
त्यसो त केही पहिलेसम्म यसरी बि*किनी लगाएका तस्वीर राख्दा फ्यानले गाली गर्ने गर्थे । अहिले भने यसलाई सामान्य रुपमा लिन थालिएको छ । समाज सामान्य बन्दै गएपछि नायिकाहरुलाई अझ खु*ला हुन पो मन लागेको हो कि? जे होस्, बि*किनी भेषमा देखिने नायिकाहरुमा स्वस्तिमा पनि थपिएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा जसरी रमाए पनि दर्शकको साथ पाउन भने अभिनय नै राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । अब ‘घा*मड शेरे’ र ‘चपली हाइट ३’ मार्फत दर्शकमाझ आउन लागेकी स्वस्तिमाले अभिनयमार्फत दर्शकलाई आफ्नो बनाउन सक्छिन् कि सक्दिनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।